Adobe Photoshopinonzi bitmap graphic editor yekuumba nekugadzira bitmap graphics (zvakadai semifananidzo) yakagadzirwa neAdobe Systems.
Shanduro yekutanga (1.0) yakabudiswa munaFebruary ye1990 yeMac OS pasi pemagariro eAdobe Systems. Parizvino, ye 14th version, iripo pasi peiyo, iyo inowanikwaCreative Cloud(CC). Pakutanga, Photoshop yakasikirwa nehama Thomas naJohn Knoll, avo vakatanga kushanda pa 1987. Chimwe chezvinyanya kukosha ndechekusunungurwa kweMicrosoft Windows operating system mune 1996 (version 4.0). Iko Creative Suite inoshandiswa mumitauro mitsva inoratidza kuti Photoshop inobatanidzwa neAdobe's Adobe's Creative Suite, kusanganisira Adobe Illustrator uye Adobe InDesign. Iko Cloud Cloud, zita rekupedzisira, rinoratidza kuti Photoshop yakawedzerwa zvakanyanya mumakore.
Photoshop mhuriAdobe Systems products:
Photoshop Elements 11.0 pro Macintosh
Photoshop Elements 11.0 ne Windows
Photoshop Elements 11.0 & Adobe Premiere Elements 11.0
MuchiChirungu, shoko racho rinowanowanikwaPhotoshop a photoshoppingkuti uchinyore kuwandisa (kunyanya retouch) mifananidzo nemifananidzo mufomu yejedi (kana iri muAdobe Photoshop kana imwe purogiramu). Izvi zvinowedzera kuti Adobe Photoshop imwe yezvirongwa zvinonyanya kuzivikanwa uye nehutano hwehutano hwemhizha hwekugadzira mifananidzo nemifananidzo. Zvisinei, Adobe inopesana nezwi iri.
Shanduro itsva ye Photoshop inounza hutachiona hunoshandiswa nehuwandu hunoenderana nehuruti anchorage simba, yakagadziriswa RAW system, zviri nani kudhinda zvinyorwa, kuvandudzwa kwekusimbisa PDF, uye Adobe Bridge. Chimwe chiziviso chakakosha zvikuru chinonzi "Smart filters", zvichibvumira kusashandiswa kwezvinhu zvinosvibisa zvezviputa pamusara uye kuve nekugadzirisa kwekupedzisira.
A zvikuru shanduro itsva CS5 ndiyo Content-Achiziva Zadzai kuti nyore retouching uye deleting zvinhu kubva pamufananidzo - Photoshop oga anoziva sei kubvisa chikamu chacho, "yokunyengera" uye unotsiva pamwechete kugutsikana kuti machisi vakasara mufananidzo kana mufananidzo. Izvi zvinokura zvakanyanya, zvinonyoresa, uye zvinogadzirisa maitiro akawanda aifanira kuitwa manheru munguva yakapfuura. Nhanho yepurogiramu yakave ichivandudzwa zvikuru, uye iri kushandisawo simba guru rekugona kwekadhi makadhi emakombiyuta. Anokwanisa kushandisa CUDA semasimba ekunyora, kunyange pamifananidzo yakawanda inoda kudikanwa iyo inoda kutora nguva-imaging.Zvimwe zvishandiso uye zvinhu zvakawedzerwa pakukumbira kwemunharaunda.
Photoshop yapfuura nepakati radical design change mu CS6. Pakutanga itsva ganda rima, inosidzikwa sezvo default, asiwo vamwe User inowanikwa zvinhu kunge rakadzokororwa kuti zvinodiwa ano uye yakananga zvinotaurwa vanoshandisa unyanzvi, akadana zvimwe kuramba uye yakajeka oparesheni.
Most kuchinja asi zvakare akaenda pazasi penyika uye Photoshop CS6 zvichienzaniswa yapfuura neshanduro mheni here kutsanya, kunyanya nokuda kunatsiridza Mercury Engine, rinoshandiswa chokushandisa mifananidzo mabasa uye zvinogonekwa pakati Graphics kadhi.
Pakati midziyo kupfuura kuwedzera uye kuvandudzika zvemasikati Content-Achiziva yedu ine achangobva akawedzera Content-Achiziva Patch uye Content-Achiziva Kufamba. Aimbova mudziyo, Patch, anoshanda kufanana Content-Achiziva Zadzai kunze shanduro CS5 asi anobvumira vanoshandisa nguva chaiyo kusarudza kubva chikamu mufananidzo anofanira kuva itsva wakazadza chinhu vanowanika, vachibvumira mukuru User kudzora unhu mugumisiro pasina zvinopesana pamusoro kumhanya kuurayiwa kuchinja.
Zvakagadzirirwa-Kuziva Nhamba ndicho chigadzirwa chakanyanya kupfuura chaicho chisingazobvise chikamu chakasarudzwa chechifananidzo, asi chinongotamira kune rumwe rutivi rwechifananidzo. Iyo inotsiva nzvimbo isina chinhu sezvinoitwa Content-Aware Patch tool uye inoendesa chinhu chakasimudzirwa mumamiriro ayo matsva. Hapana chimwe chezvigadzirwa izvi chinotsigira 100% kunaka kwekugadzirisa pamifananidzo yese, asi muzviitiko zvakawanda hutano hwekushandura hunoenderana nehuwandu hwekugadzirisa bhuku. Mukuwedzera, Zviri Mukati-Zvizivo zvinogona kushandiswa nevashandisi vasiri kutora Photoshop nemigumisiro inogutsa.
MuchidimbuCCpane kuwiriranaCreative Cloud, iyo itsva yebhizimisi yeAdobe iyo inoda kutoraCreative Suiteuye iyo yakatangwa muna May 2012. Mumuenzaniso uyu, software yacho haifaniri kunge yakagadzirwa asi sebasa, uye saizvozvo inayo ine nzira yakakwana yekubhadhara - vashandi havabhadhari software asi kuti vakwanise kushanda nayo. Kuti mubhadhare mwedzi mumwe nomumwe, anenge 50 US Dollars anopiwa ruzivo rwezvinhu zvose zvepurogiramu, kusanganisira 2 GB Cloud Space (pamwe nechisarudzo chekuwedzera mamwe 20 GB). Kana vakamira kurega kubhadhara, ivo vachangoerekana vawana purogiramu yepurogiramu uye yese basa ravo rakachengetwa mune faira faira mafomu,iyo isiri kumashure inokwirirana neChina Suite Suite.Uyezve, kuwanika kwegore ravo kuchavharwa.Kuchinja kukosha kwazvo Pricing gwara Adobe akanga chaizvo chokwadi yakagamuchirwa shareholders eungano, Adobe pacharo rinoratidza kuti ive netariro echimurenga chinja, asi kwenguva refu vanoshandisa kukonzera nenjodzi, kusanganisira okutsutsumwa uye mikumbiro pamusoro kunatsiridza ichi, yakasainwa nemakumi ezviuru zvevanhu.Adobe Creative Solutions Vachigaro-Mutungamiri akati anonzwisisa mushandisi kuti ichi ndicho chigadziro chikuru, asi Adobe yakanyatsotarisana neMirairo yeMuumbi yeMafungiro iyo zvisikwa zvose zvichange zvichitarisa uye zvinoshandiswa kune iri muenzaniso.
Zvakabudiswa mafaira mafaira epurogiramu
PSD(Photoshop document) - chimiro chinochengetedza masikisi ega ega, zvidimbu, mitsara, migwagwa, makwara,
PSB(Photoshop guru Document Format) - The pamanyorerwo rakagadzirirwa guru Manyorerwo magwaro - kusvikira 300 000 pixels mu kana divi uye rinopindura munovachengeta mafaira hombe kupfuura 2 GB (inofanira akwanise mu pazviruva); yakanyorwa mu Photoshop CS